नेकपा एमाले, बेनी नगरको प्रतिबद्धताः ‘मोबाइल अस्पताल’ सञ्चालनदेखि श्रम बैंक स्थापना र रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत युवालाई रोजगारी दिइने (पूर्णपाठसहित) – News Of Nepal
– बेनी नगरको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने ऐन–कानुन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । आवश्यकताअनुसार मौजुदा कानुनको संशोधन गरिनेछ ।
– बेनी नगरको समग्र विकासका लागि वार्षिक योजना, आवधिक, दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण एवं विभिन्न क्षेत्रगत योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– वैज्ञानिक भू–उपयोगसम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– बेनी नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकको विवरण अनलाइन सिस्टममा दर्ता गर्ने, सबै वडा कार्यालय, नगर कार्यपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायका बीचमा नेटवर्किङ प्रणालीको स्थापना तथा विकास गर्दै लगिनेछ ।
– योजना कार्यान्वयन तथा बजेट विनियोजन गर्दा पूर्व अध्ययन तथा लाभ लागत विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।
– बेनी नगर क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण लगायतका कार्यहरुको अनुगमन र नियमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिनेछ ।
– नगरपालिकाको प्रोफाइल तयार गरी अद्यावधिक गर्दै लगिनेछ ।
– संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसार प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा निश्चित भोगोलिक दूरीमा सबै बालबालिकाको पहुंँच विकास गर्दै लगिनेछ ।
– विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुंँच बनाइनेछ, प्रौढ तथा विद्यालय अभिभावक शिक्षा, विद्यालय बाहिरका बालबालिका शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गरी त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– बेनी नगरपालिका–९, तोरीपानीमा सञ्चालित प्राविधिक धारतर्फको शिक्षालाई बहुविधामा कक्षा सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक सिप तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसबाट लाभान्वित हुने सङ्ख्याको यकिन गरी रोजगारी उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
– बेनी नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको योजना ल्याइनेछ । साथै शिक्षामा लैङ्गिक समानता कायम गर्दै विद्यालय छोड्ने दरमा व्यापक सुधार ल्याइनेछ ।
– नयाँ विद्यालय निर्माण, पुस्तकालयको व्यवस्था (इ–लाइब्रेरीसमेत), खेलकुद मैदान निर्माण, थप विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण, विद्यार्थी संख्याको निश्चित अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ ।
– गरिब तर जेहेन्दार विद्यार्थीले प्राविधिक विषय पढ्न चाहेमा अध्ययनपछि तोकिएको क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउने शर्तमा उच्च शिक्षाको लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
– बालिकामैत्री शौचालयको व्यवस्था, स्यानिटरी प्याडको नियमित र भरपर्दो वितरण, बालिका छात्रवृत्ति, कम्तीमा एक विद्यालय एक स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था एवं पोशाक वितरण, दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रममार्फत् विद्यार्थी प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– आधारभूत तहको कक्षा ४ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमले संबोधन गर्ने गरी नैतिक र संस्कृत विषयको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था गरिनेछ । पालिकास्तरमा वार्षिक खेलकुद सप्ताह मनाउने व्यवस्था गरिनेछ । एक मावि, एक खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ ।
– पर्वतारोहण सम्बन्धी विषयको अध्ययनअध्यापनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– स्थानीय स्तरमा पुस्तकालय तथा वाचनालयको स्थापना गरी तिनको विकास एवं व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ ।
– बेनी नगरभित्र ‘एप्रिन्टिसिप’को सुविधासहितको विशेष सुविधासम्पन्न व्यावसायिक विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
– म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसलाई विषयगत एवं तहगत रुपमा विविधिकरण गर्न प्रदेश र संघ सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढिनेछ ।
– नगर क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराइनेछ ।
– बेनी नगर क्षेत्रका वार्ड तथा वस्तीस्तरका स्वास्थ्यचौकीहरुमा नियमित रुपमा विशेषज्ञद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण वा घुम्ती सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
– स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खाद्यपदार्थको नियमन गर्दै सबैखाले खाद्यवस्तुको मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– गर्भवती सबै महिलाले स्वास्थ्य केन्द्रमा गई प्रसूति हुने गरी पूर्वाधार र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
– गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहारका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– सङ्घ, प्रदेश एवं निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको पहल, समन्वय र सहकार्यमा भएका अस्पताल निर्माण, सञ्चालन तथा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यमा सहजीकरण गरिनेछ ।
– ज्येष्ठनागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसँग जोडिनेछ । स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधिको अनुगमन, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज औषधोपचारको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
– गरिब तथा विपन्न लक्षित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निःशुल्क गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रभित्र ‘मोबाइल अस्पताल’ सञ्चालन गर्नेबारे आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
– बिरामीलाई घरदेखि अस्पतालसम्म ल्याउन एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ ।
– सबैमा आधारभूत खानेपानी आपूर्ति तथा स्वच्छ पानी वितरणका लागि स्रोतको पहिचान गरी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रभित्रका खानेपानीका स्रोत पहिचान गरी ‘एक घरः एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– जलाधारको संरक्षण तथा खानेपानीको मुहान संरक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
– सदरमुकामसमेत रहेको बेनीबजारको सडकको दुवैतर्फ फुटपाथसहितको ढल विकास गरिनेछ ।
– बेनी नगर क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरी दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ ।
– बेनी नगरपालिका–६, जलेश्वरमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको फोहोरलाई वैकल्पिक ठाउँको पहिचान गरी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– फोहोर मैला सङ्कलन, प्रशोधन, पुनः प्रयोग तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सार्वजनिक, निजी साझेदारी पद्धति अपनाइनेछ ।
– फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाईसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग गरिएका पहल, समन्वय तथा सहकार्यमा भएका विद्युतीकरणसम्बन्धी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– विद्युत् ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश एवं विभिन्न निकायसँगको पहलकदमीमा सञ्चालित जलविद्युत लगायतका आयोजना र त्यसबाट हुने लाभका सम्बन्धमा सहजीकरण एवं सहकार्य गरिनेछ ।
– वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरुको पहिचान, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
– नगर क्षेत्रका जनताहरुलाई स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुमा आर्थिक लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।
– नगर क्षेत्रमा सुरक्षित विद्युत् प्रवाहका लागि मौजुदा तारहरुलाई एबिसी केबलमार्फत् विस्थापित गरिनेछ ।
– नगरको बजारउन्मुख क्षेत्रहरुमा सडकबत्तीको रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिको सिंँचाइका लागि पोखरी निर्माण, कुलो तथा नहर निर्माण, मर्मतसम्भारका लािग सङ्घ र प्रदेशको सहकार्यमा ५ वर्षभित्रै सिँचाइ सुविधा पु¥याउन पहल गरिनेछ ।
– स्थानीय जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, जलबाट उत्पन्न हुने सबै प्रकारका जोखिमको न्यूनीकरण र जलस्रोतको बहुआयामिक प्रयोगका लागि कानुन तर्जुमा गरी अघि बढिनेछ ।
– बेनी नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सडकमध्ये रणनीतिक महत्वका सडक पहिचान गरी कालोपत्रे गरिनेछ । साथै नगर क्षेत्रमा रहेका गोरेटो बाटो, सडक पेटी तथा पैदलमार्गको उचित विकास तथा व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ ।
– नगर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रका हकमा सडक सुरक्षा, दुर्घटना रोकथामका कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
– नगरपालिकाको केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्मको सडकमा संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र पालैपालो बजेट विनियोजन गरी सबै वडासम्म पुग्ने गुणस्तरीय सडक निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
– सडक तथा यातायात क्षेत्रमा भएको निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थापन गर्न नगरपालिका र व्यवसायीबीच समझदारी कायम गर्दै एकीकृत यातायात सञ्चालनबारे आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
– गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा सुरु भएको व्यवस्थित बसपार्क निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ ।
– बेनीबजार क्षेत्रका गल्लीहरुलाई ‘नमुना गल्ली’का रुपमा विकास गरिनेछ ।
– अस्पताल चोकदेखि जामुनाखर्क जोड्ने सडकलाई रणनीतिक सडकका रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
– बेनी बजारमा सहज यातायातका लागि निर्माणाधीन चक्रपथलाई पूर्णता दिइनेछ । साथै बेनी नगरपालिका क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइनेछ ।
– गलेश्वर–राउवडा–जामुनाखर्क–अर्थुङ्गे, थाकनपोखरी–छाप–डाँडाखेत–ठूलोखोला जोड्ने मोटरबाटोको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
– बेनी–अर्थुृङ्गे –घतान–पात्लेखेत–पाखापानी जोड्ने मूल सडकको स्तरोन्नति गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– अर्थुङ्गे–भराले–ढुङ्गानाथर–पुत्लेढुङ्गा–भीरमुनी–सुनाले हुँदै चिप्लेटी–डडुवा जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
– म्याग्दी प्रवेशद्वारदेखि गलेश्वरधासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गरिनेछ ।
– राष्ट्रिय भवनसंहिताको व्यवस्थालाई लागू गरिनेछ । यसका लागि मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ ।
– घर तथा भवनको नक्सा पास प्रणालीलाई सरल बनाई सोका बारेमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रमा हुँदै आएको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ ।
– कृषियोग्य जमिनमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत जातको बिऊ र आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइनेछ ।
– रैथाने बिउबिजनको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
– कृषि बिमा प्रबन्धको सहजीकरण, कृषि कर्जाको उपलब्धताका लागि समन्वय गर्नुका साथै कृषि तथा पशु सेवामा सहयोग गर्न प्राविधिक जनशक्तिको थप व्यवस्था गरिनेछ ।
– कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्यहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
– कृषकहरुको क्षमता विकास, कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन, प्रचारप्रसार, प्राविधिक सेवा तथा कृषि सामग्री आपूर्तिका कार्यलाई सहज र सुलभ बनाउन पहल गरिनेछ ।
– कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाए नपाएको विषयमा अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्र भित्रका बासिन्दाहरुको घर, आँगन, खेतबारीमा रहेका अनावश्यक रुख र बुट्यानहरुलाई विस्थापित गरी नगदेबाली लगाउन कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– नगरपालिकाको वडा नं. २ र ३ को माथिल्लो भेगमा सिल्टिमुर, २, ३ र ४ को उपयुक्त ठाउँमा सुन्तलाको पकेट क्षेत्र, ५, ६, ९ र १० को उपयुक्त स्थानमा व्यावसायिक टिमुर खेती प्रवद्र्धन गरी बजारीकरण गरिनेछ ।
– व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रबद्र्धन गर्न कृषि सहकारीको स्थापना, सहकारीका माध्यमबाट कृषि उपजको खरिद, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।
– जैविक (अग्र्यानिक) खेतीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको उत्पादन र जलवायु परिवर्तनमैत्री कृषि प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ ।
– पशु बधशालालाई व्यवस्थित गर्दै नगर क्षेत्रभित्र उत्पादित वस्तुको भण्डारणका लागि शीत भण्डारहरूको स्थापना तथा व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिइनेछ ।
– नगर क्षेत्रको सिँचाइलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नदीको पानी उकास (लिफ्ट), कुवाको संरक्षण, पोखरी निर्माण लगायतका कार्यमा जोड दिइनेछ ।
– सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुसँगको समन्वयमा नगर क्षेत्र भित्रका नमुना कृषक पहिचान गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि मध्यस्थता गरिनेछ ।
– स्थानीय सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– सार्वजनिक–निजी, सार्वजनिक–सहकारी एवं सार्वजनिक–सामुदायिक साझेदारीसम्बन्धी नीति तथा कानुनहरूको व्यवस्था तथा यसका आधारमा स्थानीय पूर्वाधार प्रवद्र्धन र व्यावसायिक विकासका लागि पहल गरिनेछ ।
– बचत तथा ऋण सहकारीका माध्यमबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारण नागरिकको पहँुच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
– बेनी नगरपालिकामा भू–उपयोग ऐनको कार्यान्वयन गर्नेबारे योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
– योजनाबद्ध, व्यवस्थित एवं एकीकृत वस्ती विकासबारे अध्ययन गर्ने कार्य सुरुआत गरिनेछ ।
– जोखिमयुक्त वस्ती तथा घरहरूको स्थानान्तरण एवं व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
– सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढिनेछ ।
– सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा अघि बढिनेछ ।
– नगर क्षेत्रमा रहेको जमिनको अद्यावधिक विवरणका लागि नापी नक्सा डिजिटाइजेसन तथा पुनः नापीसम्बन्धी कार्यहरू अघि बढाइनेछ ।
– बेनी नगर क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान र विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
– नगर क्षेत्रको सौन्दर्य वृद्धि एवं पर्यटकीय आकर्षणका लागि बगैँचा तथा पार्कहरूको विकास तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– पर्यटन गन्तव्य स्थलमा शान्तिपूर्ण वातावरण, व्यवस्थित होटल, रेष्टुरेन्ट एवं घरबास कार्यक्रम (होमस्टे) सञ्चालन गरी सहज यातायातको प्रबन्ध गरिनेछ ।
– निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कम्पनी सञ्चालन गरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– संघ तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान तथा पूर्वाधार विकासका लागि जोड दिइनेछ ।
– नगर क्षेत्र भित्रका ज्यामरुककोट, गलेश्वरधाम, पुलस्त्य–पुलहाश्रम, जगन्नाथ, टोड्के लगायतका ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्वका ठाउँहरुको संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण र एकीकृत विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी अघि बढिनेछ ।
– बेनी–आँपारुख–एक्लेपिपल–गुफा–पुलस्त्यपुलहाश्रम–गाजने–डढेकोट–टोड्के जोड्ने व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण गरिनेछ ।
– गलेश्वरधाम–नेप्टेचौर–कपिलाश्रम हुँदै पुलहाश्रम जोड्ने पदमार्गको निर्माण गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार, संरक्षण र संबर्धनसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
– नगरपालिकाको वार्ड नं. ५, पछैस्थित पुलहाश्रम क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न ध्यान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएका सांस्कृतिक मेला, पर्व एवं जात्राहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रको जातीय पहिचान एवं कला, संस्कृतिबारे जानकारी गराउन संग्रहालय स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ ।
– युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक तालिम, व्यावसायिक सिपमूलक शिक्षा र प्रयोगात्मक अभ्यास (इन्टर्नसिप)को व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– युवालाई स्वरोजगार बनाउन बिऊ पुँजीको व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।
– उद्यमको विकास तथा प्रवद्र्धनमा युवा परिचालन तथा प्रत्येक वार्डमा युवाकेन्द्रित उद्यम व्यवसायको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– छुवाछूत, दाइँजो, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य गर्न, सामाजिक कुरीति हटाउँदै समाजको रूपान्तरणमा युवाहरूको भूमिका बढाउँदै लगिनेछ ।
– युवाहरूको व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक माध्यमबाट स्थानीय विकास निर्माणमा युवा परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
– विपद्, महामारी, विकास निर्माण कार्य, सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि युवा स्वयंसेवकहरूको परिचालनमा जोड दिइनेछ ।
– खेलकूदको विकास तथा पञ्वद्र्धनका लागि एक वडा एक खेलकूद कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
– संविधानले मौलिक हकमा प्रत्याभूत गरेका महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सामाजिक सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने ।
– महिला उद्यमशीलतामार्फत् स्वरोजगारी बढाउने कार्यक्रम तय गर्ने, श्रम गर्ने महिलाको समान ज्याला, कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउन कार्ययोजना ल्याइनेछ ।
– नगर क्षेत्रका महिलाहरुलाई घरेलु तथा मझौला उद्योगसँग जोड्ने (आमा समूहहरुलाई ढाका, अल्लो, अचार निर्माण, भुजा उद्योग, तथा गलैंचा बनाउने कार्यमा जोड्ने)
– महिलाहरुद्वारा उत्पादित वस्तुको नगरपालिकाले खरिद गरी बजारीकरणको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ ।
– स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउँदै नगर क्षेत्रका सबै परिवारलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी गराउन पहल गरिनेछ ।
– जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत सङ्कलन गरी स्थानीय स्तरमा गर्न सकिने सहयोगको खाका तयार गरिनेछ ।
– स्थानीय पूर्वाधारलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउँदै अशक्त व्यक्तिका लागि सहजरूपमा आधारभूत सेवा पु¥याउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– संविधानमा उल्लेख भएका दलितका हक सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अघि बढाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात३ गर्दै बालश्रमको अन्त्य गर्न बालमैत्री कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
– बेनी नगरलाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउन अनाथालय र सेवाकेन्द्र निर्माण गर्ने तथा अशक्त तथा मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनेछ ।
– जेष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा तथा उनीहरूको अनुभवको उपयोगबारे कार्ययोजना तयार गरी काम शुरु गरिनेछ ।
– समाज कल्याण सम्बन्धी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।
– सामाजिक रूपान्तरण एवं मानवीय सहायताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका परोपकारी संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रका विपन्न वा गरिब परिवारको पहिचान र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । साथै गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई लक्षित परिवारतर्फ केन्द्रित गरिनेछ ।
– विपन्न परिवारलाई उत्पादनका साधन उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आयआर्जनको अवसर उपलब्ध गराइनेछ ।
– श्रम बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन एवं सूचना प्रणालीको विकास र रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
– श्रम गर्न सक्ने र चाहनेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडिनेछ ।
– स्वरोजगारीका लागि लघुउद्यम तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि कम्तीमा एउटा सिपमूलक तालिम दिने तथा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरू (रिटर्नी)को ज्ञान, सिप र पूँजीको सदुपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रका खाली पाखोमा वृक्षारोपण गर्ने, विभिन्न वनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन र निजी वनको विकासका लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
– नगर क्षेत्रको विकास गर्दा सकेसम्म डोजरको सट्टा श्रमको प्रयोग (हरित प्रविधि) मा जोड दिइनेछ ।
– विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न भूसंरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यहरू, नदी तटबन्धन तथा बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
– वन डढेलोबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न प्रतिकारात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
– विभिन्न प्रकारका विपद्हरूको सामना गर्न पूर्वतयारी तथा आपतकालीन उद्धार, राहत एवं पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
– विपद्–जोखिम नक्साङ्कन तथा विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
– वन क्षेत्रमा हुने मानवीय अतिक्रमण रोक्न प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा जडिबुटी एवं वन पैदावरको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्यहरू अघि बढाइनेछ ।
– बेनी नगरको माथिल्लो भौगोलिक क्षेत्रबाट आउने बाढीको समुचित निकासका लागि आवश्यक ठाउँमा स्थायी समाधानका उपाच खोजिनेछ ।
– नगर क्षेत्रमा लघु, साना एवं मझौला उद्योगहरूको स्थापना र विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
– स्थानीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न हाटबजार पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक सीप विकास, तालिम तथा बीजपुँजीको व्यवस्थामा जोड दिइनेछ ।
– नगरपालिकाले लिने स्थानीय कर, सेवा शूल्क तथा दस्तुर परिचालनलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाइनेछ ।
– राजस्वको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै राजस्व छली रोक्न आवश्यक संयन्त्रको स्थापना र विकास गरिनेछ ।
– सूचना प्रविधिमा आधारित करदाताको विवरण तयार पारी राजस्व सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– राजस्व सङ्कलनमा नगरबासीको सुविधाका लागि सबैखाले करहरु एकद्वार प्रणालीबाट बुझ्नका लागि बैंकहरुसँग समन्वय गरिनेछ।
– राजस्व परिचालनको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रभित्रका राजस्व सङ्कलन केन्द्रमा करदाताहरुको उच्च मनोबल कायम गर्नका लागि करदातामैत्री बसाइ व्यवस्था र द्रुत सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– संविधानले प्रत्याभूत गरेका एकल अधिकार सूचीका सबै कानुन निर्माण गरिनेछ ।
– बेनी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, खरिद, राजस्व परिचालन, प्राकृतिक स्रोत (जमीन, वनङ्गगल, जलस्रोत, आदि) को व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ ।
– बेनी नगरपापलिकाको विकासका प्रमुख मुद्दा पहिचान गरी त्यसमा राजनैतिक सहकार्य र सहमतिको मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि बढिनेछ ।
– न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, समितिको क्षमता विकास एवं स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।
– न्याय प्राप्तिमा स्थानीय जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न त्यसलाई सक्दो छरितो बनाइनेछ ।
– न्यायिक समितिका फैसलाहरूको कार्यान्वयन र सो को अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।
– नगर क्षेत्रका विपन्न तथा गरिबका लागि निशूल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउनेबारे आवश्यक नीति तय गरिनेछ ।
– बेनी नगरको वडा तथा पालिकास्तरीय प्रोफाइल तयार गरी त्यसलाई अद्यावधिक प्रणालीसँग जोडिनेछ ।
– बेनी नगरपालिकासँग सम्बन्धित सूचना तथा अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न नवीनतम प्रविधिसहितको डिजिटल सूचना तथा अभिलेख प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रका सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख सङ्कलन, तिनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
– नगरपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारको विकास गर्दै लगिनेछ ।
– कर्मचारी व्यवस्थापन र परिभाषित उत्तरदायित्वका माध्यमबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
– बेनी नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाहरुबारे विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउने, सुशासन र सेवा प्रवाहबारे नियमित जानकारी सम्पे्रषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– भौगोलिक क्षेत्र, जनसङ्ख्या, गरिबी र विकासको अवस्थाका आधारमा वडा तहमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
– सङ्गठन–व्यवस्थापन सर्वेक्षण र सङ्गठन संरचना तयार पारी जनशक्ति व्यवस्थापन योजना र जनशक्ति परिचालन नीति अपनाइनेछ।
– सुशासनको कसीमा नगरपालिका, वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिहरू खरो उत्रने योजना र कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
– लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण र लेखा समितिको कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गराइनेछ ।
– नगर क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न आवश्यकताअनुसार प्रहरी बिट स्थापना गरिनेछ ।
– बेनी नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई छिटोछरितो बनाउँदै सहजरुपमा सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
– प्रत्येक वडामा निर्वाचित सदस्यमध्ये एक जनालाई सूचना अधिकारी÷प्रवक्ताको रुपमा जिम्मेवारी तोकिनेछ ।
– नगरबासी सम्पूर्ण नागरिकका विवरणहरु वडा कार्यालयबाटै प्रविष्टि गर्ने र नगर कार्यपालिकाबाट त्यसको अनुगमन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– भूकम्पबाट भत्किएका सम्पूर्ण निजी आवासहरूको पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका काम यथाशिघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।
– भूकम्पबाट भत्किएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू, शिक्षण संस्थाहरू एवं सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।
– विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय आवश्यकताका अन्य कार्यहरूको कार्ययोजना तयार पारी लागू गरिनेछ ।
– बेनी नगरलाई नमुना पालिका बनाउन एक गाउँ ः एक उत्पादन कार्यक्रमको सुरुआत गरिनेछ ।
– लोपोन्मुख, सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक, तेस्रो लिङ्गी र जोखिममा रहेका जाति तथा परिवारको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिइनेछ।
– दुर्गम, पहिरोग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको बसाइ व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायको साझेदारीमा व्यवस्थित र सुविधायुक्त ग्रामीण सामुदायिक केन्द्र तथा सिटी सेन्टरको स्थापना गरिनेछ ।
– बिमा नीतिलाई करप्रणालीसँग जोडिनेछ ।
– नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न संघसंस्थासँगको समन्वयमा विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्यबीमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
– नगर क्षेत्रका यूवा उद्यमीद्वारा रोजगार सिर्जना गर्नेगरी काम सुरु गरेमा त्यसको प्रोत्साहनका लागि करछुट लगायतका सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायि (सि.एस.आर.) अन्तर्गतका कार्यक्रम गर्नका लागि समन्वय गरिनेछ ।
नेकपा एमाले बेनी नगरपालिकाको घोषणापत्र-२०७९